Agricultural Imishini, Hlanganisa Mvuni, Ummbila Hlanganisa Mvuni - Zhonglian
NEW WEZOLIMO imishini BONKE NEZIDINGO ZAKHO
Ummbila sihlanganise ezivunayo
Peanut sihlanganise ezivunayo
Ukolweni / irayisi sihlanganise ezivunayo
Zhengzhou Zhonglian Harvest Machinery Co., Ltd kuyinto uchwepheshe sihlanganise ezivunayo Manufacturing Inkampani okuyinto luhlanganisa ucwaningo umkhiqizo, izingxenye ezisele esikhiqiza, ephelele umshini ukuhlangana futhi umkhiqizo emva-ukudayiswa service. Le nkampani yasungulwa ngo-1995 futhi uhlala phakathi Zhiji Road Xingyang edolobheni, Isifundazwe Henan. Le nkampani ihlanganisa square metres mayelana 150,000, kanti abasebenzi abangaphezu kuka-500 kuhlanganise 56 ubunjiniyela abaphathi lobuchwepheshe kanye 67 ochwepheshe abanamakhono. Amafa esewonke ifinyelela Nathi izigidi $ 60 equkethe kokusebenza Nathi $ 25 izigidi. The corporate credit ratting usezuze 2A + e-Industrial and Commercial Bank.
Nge ubuchwepheshe njengoba nje nengaphakathi zokuthuthukisa nokwenza umkhiqizo eliphezulu ngokuvumelana nezidingo ezahlukahlukene emakethe.